Kwakakosha mafuta bhodhoro Vagadziri & vanotengesa - China Yakakosha mafuta bhodhoro Fekitori
Zvakanakira kambani yedu, zvakanakira chigadzirwa chedu
Tiri nyanzvi gadzira kuita kutsvagisa, kusimudzira, kugadzira, kutengesa uye sevhisi yekushongedza kurongedza, mishonga kurongedza uye kurongedza chikafu.
Isu tine redu rekutsvagisa nekusimudzira dhipatimendi, mazhinji edu matsva mhando zvigadzirwa zvine patent, ikozvino isu tine 3 patent yemabhodhoro edu, tinopasa imwe bvunzo certification, semuenzaniso SGS.etc.
Dhipatimendi redu rekutengesa rawana yakanakisa yepasirese yekutengeserana e-commerce timu, timu yedu yese ine pfungwa yakasimba yebasa.
Wholesale Transparent Glass ...
muraraungu ane mavara akakosha o ...
mavara 5ml 10ml kudonhedza humbowo ...
15ml sikweya Clear usina chinhu Gla ...
Wholesale Transparent Girazi Rinokosha Oiri Square Mabhodhoro
Unyanzvi: 15ml, 25ml, 35ml, 50ml, 100ml
Kushanda: Yakakwana kurodha mafuta akasiyana siyana, senge akakomberedzwa akakosha mafuta, oiri oiri, musimboti, pefiyumu, masaja mafuta nezvimwe.
Chiteshi: Lianyungang, Shanghai, Ningbo
Kubhadhara: T / T.
Wholesale Yakafuta Cobalt Bhuruu Round Girazi Boston Jars
Ruvara: cobalt bhuruu
Unyanzvi: 15ml, 30ml, 60ml, 120ml, 250ml, 500ml
Sevhisi: silika skrini, inopisa kutsika, chando, chitaridzi, kudhinda ruvara uye nevamwe
Wholesale Green Boston Glass mabhodhoro emafuta nemaLids
Vhoriyamu: 15ml, 30ml, 60ml, 120ml, 250ml, 500ml
Chiteshi: Lanyungang, Shanghai, Ningbo
Nyowani Dhizaini Amber Girazi Imwechete Gourd Yakakosha Mafuta Bhodhoro
Vhoriyamu: 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
Ruvara: Amber brown imwechete yegoridhe mafuta mabhodhoro
Usage: Zvakakosha Oiri
Chimiro: Yakakwira mhando
Wholesale Custom zvizorwa refillable chinhu kaviri gourd zvinokosha mafuta mabhodhoro
Unyanzvi: 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
Nzvimbo Yokutanga: Shanghai.Lianyungang, Ningbo
Logo: Kudhinda Yakasarudzika Logo
Sevhisi: silika skrini, kupisa kutsika, chando, chitaridzi, kudhinda ruvara, kushongedza kupfura uye mamwe maitiro
Kushanda: Yakakwana kurodha mafuta akasiyana siyana, senge akakomberedzwa akakosha mafuta, oiri oiri, essence, pefiyumu, masaji mairi etc.
Kupisa kutengesa shava isina chinhu inozadzikiswa Square Yakakosha Mafuta Mabhodhoro
Ruvara: Hombodo dzebrown dzakatenderera dzinodzivirira kubva kumwaranzi yeUV uye dzine hukuru hwemutsipa hwekudira uye kuzadza.
Kushandisa: Chinhu chakakwana chemidziyo yakakosha yemafuta, zvinonhuwira, mafuta eruzivo kana imwe mvura uye zvinosiyana makapisi pamwe nemishonga yakawanda nezvinonhuwira.
Wholesale isina chinhu shava girazi brown girazi yakakosha mafuta rollerball
Ruvara: shava rinopenya
Unyanzvi: 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
Kushanda: Iyo haigone chete kushandiswa kuchenesa mafuta ekuzora, akakosha oiri uye rimwe basa remvura, iro girazi rakatsvukuruka rine basa rakasarudzika, rinogona kushandiswa kudzivirira kukanganisa kweiyo ultraviolet mwenje, kuona kushanda kwemvura.
Bvisa mabhodhoro emhando yepamusoro emafuta ane mhando dzemakepisi
Kushanda: Zvakakosha mabhodhoro emafuta ndiyo sarudzo yakanakisa yemafuta akakosha, maoiri ekuzora, zvinonhuwira, marabhoritari, makemikari uye zvimwe zvinwiwa.
Feature: Bvisa mabhodhoro egirazi akapoterera ari nyore kwazvo pakufamba.
Hot kutengesa bhuruu girazi chinotenderera bhora mabhodhoro emafuta akakosha ane makapu akasiyana
Ruvara: Amber bhuruu
Usage: Bhuruu girazi chinotenderera bhora mabhodhoro emafuta akakosha inzvimbo yekuchengetera yakakosha maoiri, zvinonhuwira uye imwe mvura.
Iyo gobvu rakakwira-girazi girazi girazi rakaomarara uye rinodzivirira, zvichiita kuti zvive zvakaoma kwazvo kuputsa kana kukwenya.
Iyo amber mudziyo inogona kuchengetedza mafuta akakosha uye anotakura mafuta kubva mukukuvara. Tine zvirinani kudzora kudzora, chakakwana chinyoro chinodzora chinokwana zvakakwana mubhodhoro, saka kana iwe ukagadzirira yako wega musanganiswa-iwe unowana iyo chaiyo nhamba yemadonhwe iwe aunoda.
Yakatsva kutengeswa Dema Girazi Roller Mabhodhoro akakosha Oiri
Kupisa Kutengesa Kwakasarudzika Kunodzokororwa White Porcelain Yakakosha Mafuta Bhodhoro
Iyo bhodhoro regirazi rakagadzirwa nezvinhu zvakatipoteredza zvine hushamwari, haina BPA uye lead, uye inogona kuchengeta nekushandisa yako mvura zvinobudirira uye zvakachengeteka. Girazi rakachengeteka zvakanyanya kupfuura plastiki nekuti plastiki inogona kusefa makemikari pasi pemamwe mamiriro.
Bhodhoro regirazi rinoshandisa zvine simba uye rakanakira kusanganisa yako yekuchenesa, yakamwayiwa mbesa, aromatherapy, imba yerineni yekumwaya yekuisa ironing, bvudzi rinosimbisa pfapfaidzo, yakasvibisa mweya freshener, pasi kana kapeti kuchenesa, Musanganiswa wevhiniga nemvura yekuchenesa windows, kugadzira -up kumeso moisturizers, nezvimwe.
Mhando dzakasiyana dzeCaps uye Tops dzichave dziripo.